“Wax badan ayaan kaa bartay.”.- Lionel Messi oo Fariin Damqasho leh u soo diray Ronaldinho - Wargane News
Home Sports “Wax badan ayaan kaa bartay.”.- Lionel Messi oo Fariin Damqasho leh u...
“Wax badan ayaan kaa bartay.”.- Lionel Messi oo Fariin Damqasho leh u soo diray Ronaldinho
Lionel Messi ayaa Fariin Damqasho leh u soo diray Saaxiibkii Ronaldinho kaddib markii uu ka fariistay ciyaaraha.
Assis ee ah Ronaldinho walaalkii isla markaana ah Wakiilkiisa ayaa goor dhowayd ka dhawaajiyay in rugcdaaga reer Brazil uu gabi ahaan isaga fariistay kubbada cagta.
Kabtanka xulka Argentina oo qiray inuu wax badan ka bartay Ronaldinho ayaa Fariin uu soo dhigay Baraha Bulshada u dhaceysay sida
“Sida aan had iyo jeer iraahdo, wax badan ayaan la joogaaga ka bartay, markasta waan kaaga mahad naqi doonaa sida ay u sahlaneyd inaad wax kasta ii sameysay markii aan ku soo biiray qolka Dhar badelashada.
“Nasiib ayaan kulahaa inaan waxyaabo badan kula wadaagay aad ayaana u faraxsanahay, maxaa yeelay marka lagu daro tayadaada aan caadiga ahayn ee kubbada waxaad tahay shaqsi wayn oo wanaagsan taas ayaana ah tan ugu muhiimsan.
“Xitaa haddii aad go’aansato inaad tagto, Kubbada cagta marna ma ilaawi doonto dhoola caddeyntaada. Tan ugu fiican ayaan kuu rajeynayaa Ronnie.’
Labada Laacib ayaa afar Sano ka soo wada ciyaaray Nou Camp ka hor inta uusan Ronaldinho u dhaqaaqin AC Milan.
Miyuu Riyad Mehrez Ku Biiri Doonaa Arsenal ? Macalinka Leicester Claudio Rianeri Oo Ka Jawaabay